square နှင့်ပတ်သက်သည့် အသုံးထူးတစ်ချို့ - Myanmar Network
square နှင့်ပတ်သက်သည့် အသုံးထူးတစ်ချို့
Posted by zar ni (My Way!) on September 23, 2013 at 12:54 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
အခြေခံ ပုံသဏ္ဍာန်များဖြစ်သည့် စက်ဝိုင်း၊ လေးထောင့်၊ တြိဂံ၊ တို့အားတင်စားပြောဆိုသည့်စကားများတွင် မကြာခဏတွေ့ရတတ်သည်။ အောက်တွင် square နှင့်ပတ်သက်သည့် အသုံးထူးတစ်ချို့အားတွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။
1. To beasquare peg inaround hole ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု၊ အခြေအနေတစ်ခုနှင့် သဟဇာတမဖြစ်၊ အဆင်မပြေဘူး။
I feel likeasquare peg inaround hole at my office.
ငါ့ရုံးမှာ ကျင်းအ၀ိုင်းထဲ လေးထောင့်သပ်ထည့်သလိုပဲ အဆင်မပြေဘူး။
2. To go back to square one အခက်အခဲတစ်ခု၊ အမှားအယွင်းတစ်ခုကြောင့် အစကနေပြန်စသည်။
It looks like it's back to square one for you.
အခြေအနေကြည့်ရတာတော့ မင်း တစ်ကနေပြန်စရမယ်နဲ့တူတယ်။
3. Be there, or be square ပွဲလမ်း၊ အခမ်းအနားတစ်ခုကိုတက်ချင်တက်၊ မတက်ချင် ရိုင်းတယ်လို့အထင်ခံရင်လည်းခံ
There'sabunch of people going to be at John's on Saturday. Be there or be square.
ဂျွန်ရဲ့အိမ်မှာဒီစနေ လူတွေအများကြီးလာမှာ။ သွားချင်လည်းသွား၊ မသွားချင်လည်း ရိုင်းတယ်လို့အထင်ခံပေါ့။
4. call something square အကြွေး၊ တာဝန်ဝတ္တရားတစ်ခု ပေးဆပ်ပြီးကြောင်းပြောသည်။
Thanks for the hundred bucks. I think we can call it square now.
ငွေတစ်ရာအတွက်ကျေးဇူးပဲ။ အခု အကြွေးရှင်းပြီပေါ့နော်။
5. square something with someone တစ်ယောက်ယောက်၏သဘောတူညီချက်ရယူသည်။
Sam intended to square everything with Henry when he had time.
ဆမ်ဟာအချိန်ရသည့်အခါ ဘယ်ဟာမဆို ဟင်နရီရဲ့သဘောတူညီချက်ရချင်သည်။
6. square accounts ပေးစရာရှိတာပေးသည်။ နားလည်မှုလွဲမှားနေမှုကို ဖြေရှင်းသည်။
I have to square accounts with the bank this week, or it'll take back my car.
ဒီတစ်ပတ် ဘဏ်နဲ့စာရှင်းအကျေရှင်းမှဖြစ်မယ်။ မဟုတ်ရင် ငါ့ကားကိုသိမ်းသွားလိမ့်မယ်။
I'm going to square accounts with Tom. He insulted me in public, and he owes me an apology.
ငါ တွမ်နဲ့စာရင်းရှင်းမှဖြစ်မယ်။ လူကြားထဲမှာငါ့ကို စော်ကားထားတာ သူတောင်းပန်ရမယ်။
7. square deal ရိုးရိုးသားသား၊ မျှမျှတတရှိသည့်အပေးအယူ
All the workers want isasquare deal, but their boss underpays them.
အလုပ်သမားအားလုံးလိုချင်တာက မျှမျှတတပေးဖို့ပဲ။ ဒါပေမယ့် သူဌေးက တန်ကြေးထက်လျော့ပေးတယ်။
8.asquare meal အဟာရပြည့်ဝသည့်အစားအစာ။ လူတစ်ယောက်အတွက်လိုအပ်သည့် အဟာရ မျိုးစုံ ပြည့်ပြည့်၀၀ပါဝင်သည့် ထမင်းပွဲ။
Most of these supermodels don't look like they've hadasquare meal in their life.
9. fair and square မျှမျှတတ၊ သမာသမတ်ကျသော
We won the match fair and square.
10. square the circle ခက်ခဲသည့်အလုပ်တစ်ခုကိုအားထုတ်သည်။ မဖြစ်နိုင်ထင်ရသည့်ပြဿနာတစ်ခုကို အဖြေရှာသည်။
Few poor countries can afford to look after their works of art properly, but neglect is unwise if you want to attract tourists. Thailand is attempting to square the circle.
ဆင်းရဲသည့်နိုင်ငံအနည်းငယ်သာ သူတို့၏အနုပညာလက်ရာများကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နိုင်စွမ်းရှိကြသည်။ လျစ်လျူရှုထားပါကလည်း ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များအားစွဲဆောင်ဖို့ အမျှော်အမြင်နည်းရာကျသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံသည် ထိုပြဿနာကို ဖြေရှင်းရန်အားထုတ်နေသည်။
11. square your shoulders မတုန်မလှုပ်သည့်အမူအယာပြသည်။ ပြတ်သားမှုကိုပြသည်။
When the judge asked her if she was guilty or not guilty, she squared her shoulders, looked the judge in the eye, and said, “Not guilty.”
တရားသူကြီးက သူ့အား အပြစ်ရှိမရှိမေးသည့်အခါ “အပြစ်မရှိပါ” ဟု တရားသူကြီးအား မျက်လုံးချင်းဆိုင်ကာ ပြတ်သားစွာဆိုလိုက်သည်။
12. square off ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်သည်။ ရန်စောင်သည်။
The two men squared off.
13. squared away သပ်သပ်ရပ်ရပ်စီစဉ်သည်။
Is Ann squared away in her dorm room yet?
အန်း တစ်ယောက် သူ့အခန်းကိုရှင်းပြီးပြီလား။
14. square up ရန်ဖြစ်ဖို့အသင့်။
John was angry and ready for squaring up forafight.
ဂျွန်ဟာ စိတ်ဆိုးလို့ ရန်ဖြစ်ဖို့ပြင်နေသည်။
15. on the square ရိုးရိုးသားသား၊ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း
He has always dealt on the square.
သူအမြဲတမ်း ရိုးရိုးသားသားနဲ့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆက်ဆံခဲ့တယ်။
အခွခေံ ပုံသဏ်ဍာနျမြားဖွဈသညျ့ စကျဝိုငျး၊ လေးထောငျ့၊ တွိဂံ၊ တို့အားတငျစားပွောဆိုသညျ့စကားမြားတှငျ မကွာခဏတှရေ့တတျသညျ။ အောကျတှငျ square နှငျ့ပတျသကျသညျ့ အသုံးထူးတဈခြို့အားတှရေ့မညျဖွဈသညျ။
1. To beasquare peg inaround hole ပတျဝနျးကငျြတဈခု၊ အခွအေနတေဈခုနှငျ့ သဟဇာတမဖွဈ၊ အဆငျမပွဘေူး။
ငါ့ရုံးမှာ ကငျြးအဝိုငျးထဲ လေးထောငျ့သပျထညျ့သလိုပဲ အဆငျမပွဘေူး။
2. To go back to square one အခကျအခဲတဈခု၊ အမှားအယှငျးတဈခုကွောငျ့ အစကနပွေနျစသညျ။
အခွအေနကွေညျ့ရတာတော့ မငျး တဈကနပွေနျစရမယျနဲ့တူတယျ။
3. Be there, or be square ပှဲလမျး၊ အခမျးအနားတဈခုကိုတကျခငျြတကျ၊ မတကျခငျြ ရိုငျးတယျလို့အထငျခံရငျလညျးခံ
ဂြှနျရဲ့အိမျမှာဒီစနေ လူတှအေမြားကွီးလာမှာ။ သှားခငျြလညျးသှား၊ မသှားခငျြလညျး ရိုငျးတယျလို့အထငျခံပေါ့။
4. call something square အကွှေး၊ တာဝနျဝတ်တရားတဈခု ပေးဆပျပွီးကွောငျးပွောသညျ။
ငှတေဈရာအတှကျကြေးဇူးပဲ။ အခု အကွှေးရှငျးပွီပေါ့နျော။
5. square something with someone တဈယောကျယောကျ၏သဘောတူညီခကျြရယူသညျ။
ဆမျဟာအခြိနျရသညျ့အခါ ဘယျဟာမဆို ဟငျနရီရဲ့သဘောတူညီခကျြရခငျြသညျ။
6. square accounts ပေးစရာရှိတာပေးသညျ။ နားလညျမှုလှဲမှားနမှေုကို ဖွရှေငျးသညျ။
ဒီတဈပတျ ဘဏျနဲ့စာရှငျးအကရြှေငျးမှဖွဈမယျ။ မဟုတျရငျ ငါ့ကားကိုသိမျးသှားလိမျ့မယျ။
ငါ တှမျနဲ့စာရငျးရှငျးမှဖွဈမယျ။ လူကွားထဲမှာငါ့ကို စျောကားထားတာ သူတောငျးပနျရမယျ။
7. square deal ရိုးရိုးသားသား၊ မြှမြှတတရှိသညျ့အပေးအယူ
အလုပျသမားအားလုံးလိုခငျြတာက မြှမြှတတပေးဖို့ပဲ။ ဒါပမေယျ့ သူဌေးက တနျကွေးထကျလြော့ပေးတယျ။
8.asquare meal အဟာရပွညျ့ဝသညျ့အစားအစာ။ လူတဈယောကျအတှကျလိုအပျသညျ့ အဟာရ မြိုးစုံ ပွညျ့ပွညျ့ဝဝပါဝငျသညျ့ ထမငျးပှဲ။
9. fair and square မြှမြှတတ၊ သမာသမတျကသြော
10. square the circle ခကျခဲသညျ့အလုပျတဈခုကိုအားထုတျသညျ။ မဖွဈနိုငျထငျရသညျ့ပွဿနာတဈခုကို အဖွရှောသညျ။
ဆငျးရဲသညျ့နိုငျငံအနညျးငယျသာ သူတို့၏အနုပညာလကျရာမြားကို ထိနျးသိမျးစောငျ့ရှောကျနိုငျစှမျးရှိကွသညျ။ လဈြလြူရှုထားပါကလညျး ကမ်ဘာလှညျ့ခရီးသညျမြားအားစှဲဆောငျဖို့ အမြှျောအမွငျနညျးရာကသြညျ။ ထိုငျးနိုငျငံသညျ ထိုပွဿနာကို ဖွရှေငျးရနျအားထုတျနသေညျ။
11. square your shoulders မတုနျမလှုပျသညျ့အမူအယာပွသညျ။ ပွတျသားမှုကိုပွသညျ။
တရားသူကွီးက သူ့အား အပွဈရှိမရှိမေးသညျ့အခါ “အပွဈမရှိပါ” ဟု တရားသူကွီးအား မကျြလုံးခငျြးဆိုငျကာ ပွတျသားစှာဆိုလိုကျသညျ။
12. square off ထိပျတိုကျရငျဆိုငျသညျ။ ရနျစောငျသညျ။
13. squared away သပျသပျရပျရပျစီစဉျသညျ။
အနျး တဈယောကျ သူ့အခနျးကိုရှငျးပွီးပွီလား။
14. square up ရနျဖွဈဖို့အသငျ့။
ဂြှနျဟာ စိတျဆိုးလို့ ရနျဖွဈဖို့ပွငျနသေညျ။
15. on the square ရိုးရိုးသားသား၊ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး
သူအမွဲတမျး ရိုးရိုးသားသားနဲ့ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးဆကျဆံခဲ့တယျ။
Permalink Reply by Khine Zin Oo on September 23, 2013 at 17:25
Permalink Reply by sabai win on September 23, 2013 at 21:17
Permalink Reply by venus on September 26, 2013 at 16:19
Thank you very much. sir!
Permalink Reply by moemoelwin on September 27, 2013 at 14:32